I-vault encane ye-Vogüé - I-Airbnb
I-vault encane ye-Vogüé
Vogüé, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
Indawo yonke ibungazwe ngu-Benoit
U-Benoit uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Leli gumbi elilungiswe kabusha ngokuphelele litholakala endaweni engokomlando yase-Vogüe elinganiswe phakathi kwemizana emihle kakhulu eFrance. Izokunikeza konke ukunethezeka kokuphila ukuze ujabulele ngokugcwele ukuhlala kwakho e-Ardèche. Endaweni eseduze uzothola umfula, izindawo zokudlela namanye amasevisi. Kungakapheli amakhilomitha angu-30 uzokwazi ukungena kuzo zonke izindawo zokuvakasha emnyangweni: i-Pont d 'Arc, i-Cave Chauvet, i-Cascade du Ray Pic noma imizana evamile ezungeze i-.
I-vault encane yiseli endala enefasitela elenza kungene umoya omuhle. Inenzuzo yokuyigcina ipholile ehlobo. Ngaphandle kwenkathi yonyaka kungaba yinto ejabulisayo kancane. Ukuze wenze lokhu, sikunikeza i-bioethanol fireplace kanye ne-fireplace enhle kagesi.
Leli kamelo elilungiswe ngokuphelele linendawo engu-39 mylvania. Ukungena kungomnyango omncane ongu-1 m 60 phezulu , naka ikhanda lakho. Ngumnyango odume ngokuba ku-TV, ngenxa yetshe lawo elibiyelwe njengosizo.
Indawo yokuhlala inamazinga angu-2 ahlukaniswe ngezitebhisi ezingu-2:
- Izinga lokuqala lihlanganisa indlu yangasese nekhishi elinakho konke okudingekayo.
- Izinga lesibili lihlanganisa indawo yokuhlala nokudlela kanye ne-160 ngombhede ka-200. Kukhona negumbi lokugezela elivaliwe elineshawa engena endlini.
Uzokwazi ukungena ku-inthanethi nge-wifi.
Ayikho i-decoder noma i-decoder ye-TV, kodwa uzokwazi ukungena enkundleni eyaziwayo yokubuka amafilimu nemibukiso. Ungabona neziteshi ezithile kokuthi Phinda udlale noma uphile ngebhokisi le-wifi elixhunyiwe.
Ukuze upake, kunezindawo zokupaka zomphakathi ezingu-2 zamahhala ezingamamitha ayikhulu ukusuka endlini.
Imbawula yasendlini: eye-ethanol
Indlu isendaweni encane ebizwa ngokuthi yi- "Rue des Balcons", yaziwa ngokuba nendawo yokusika amatshe emvelaphi yedolobhana ngakho ingenye yakudala kunazo zonke e-Vogüé. Phakathi nokuhambahamba kwemizuzu engu-5 uzothola: umfula, ibhishi lase-Vogüé nendawo yayo yokosa, isigodlo sayo, izindawo zokudlela kanye ne-pizzeria. Amakhilomitha angu-2 kude kukhona indawo yokubhaka, amakhemisi, isitolo esilula njll...
Inombolo yepholisi: 07348 000021 KL
Hlola ezinye izinketho ezise- Vogüé namaphethelo